सायद अब हाम्रो भेट हुँदैन होला – प्रेम दिवश विशेष « रंग खबर
“सायद अब हाम्रो भेट हुँदैन होला !”
छुटिँदै गर्दा तिमीले भनेका यी शब्दहरु , मेरो जिन्दगीको हरेक गतिलाई परिवर्तन गरिदिएका छन ! तिमीले सायद भनेका थियौ ,अब लाग्दै छ तिम्रो र मेरो भेट कहिल्यै हुँदैन होला ! जब बाटोहरु परिवर्तन हुन्छन , गन्तबयहरु फेरिँदै जान्छन अनि सपनाहरु छुट्टिँदै जान्छन कसरी भेट होला र है सानू ? अचम्म लाग्छ तिमी र म कसरी साथी भयौँ कसरी बोल्न सुरु गर्यौँ र कसरी यति धेरै नजिक भयौँ , कसरी यति धेरै माया गर्थ्यौ एक अर्कालाई अचम्म त तिमीलाई नि लाग्छ होला !
कलेज जाने पहिलो दिन ! त्यस्तो धेरै उत्साह नि थिएन , त्यस्तो धेरै उमंग नि थिएन ! स्कुल पढ्दाका धेरै साथिहरु कलेजमा पनि सँगै भएर नि हुन सक्छ सायद !
बिहानको कलेज ! बिहान पढ्नेलाई निद्रा भन्दा प्यारो अरु के नै हुन्छ होला र ! तर के गर्नु पढन नगएर नि भएन ,आफूलाई निद्रा भनेपछी जहाँ पनि लाग्ने ,बसमा , कतै साथिभाई सँग फिल्म हेर्न जाँदा जता ततै ! निद्रा र तिमी बराबर प्यारा थियौ ! बिहान ६:३० बाट कलेज को क्लास सुरु थियो , ब स आउँथ्यो लिन ६ बजे ! एक मिनेट ढिला भए नि छोडेर जान्थ्यो ! बिहान अर्लाम १०-१२ ओटा राख्थेँ , उठन चाहिँ ५:५० मा उठेर तयार भएर बस चढ्न लाग्थेँ ! केटा मान्छे तयार हुन धेरै समय नै नलाग्ने !
घरमा एक्लै बस्ने भएकाले उठाउने पनि कोहि हुँदैनथ्यो, बरु प्राय जसो , ममीले उठाइदिनु हुन्थ्यो फोन गरेर ! प्राय मेरो दिनको सुरुवात ममीको स्वर सुनेर हुने गर्थ्यो !
कलेजको पहिलो दिन थियो बसमा खासै केही वास्ता गरिनँ सरासर बसबाट झरेर क्लास तिर लागेँ ! स्कुल पनि त्यही भएकाले खासै केही वास्ता नै लागेन त्यही वातावरण , त्यही ठाउँ त्यसैले जुन उमंग हुनु पर्ने थियो त्यस्तो केही पनि थिएन ममा ! सरासर गएँ क्लास पुगेँ !
धेरै स्कुल पढ्दाका अनुहारहरु नै थिए ! मेरो बेस्ट फेर्न्ड पनि थियो ! पुग्नासाथ हल्ला सुरु भै हाल्यो ! नानी देखि लाग्या बानी के छोडिन्थ्यो ! अझ धेरै पुराना साथिहरु नै भएकाले मलाई हल्ला गर्न कुनै कुराले रोकेन !
६:३0 भयो सर कोठाभित्र छिर्नु भयो ! जुलोजी पढाउने सर हुनुहुँदो रहेछ !
सर आएर सबैको परिचय सुरु गर्नु भयो ! मेरो साइडको बेन्च खाली थियो ! पहिलो दिन भएकाले नि होला सायद ! कमै थियो विद्यार्थी संख्या ! सर कक्षा मा पस्नु भएको केही बेरमा ढोका ढक् ढक भयो ! ढोका नजिकै भएको साथिलाई ढोका खोल्न लगाउनु भयो ! सुरुमा त केही वास्ता गरिनँ !
छोटो छोटो कर्ली कपाल , हल्का गाजलमा चम्किएका ती ठुला ठुला आँखा , मिलेको ओठ , हेर्दै अलि चुलबुल पाराकी , अलि छोटो हाइट, ढोकामा उभिएकी उनीलाइ
देखेर मनले भन्दै थियो “सि इज जस्ट बिउटीफुल !”………!
देखेर मनले भन्दै थियो “सि इज जस्ट बिउटीफुल !”
कोहि कसरी यति बिधि राम्री हुन सक्छ के ! मनले यो पनि सोच्दै थियो ! तर मलाई यस्तो गरि अँह कोहि पनि मन परेको थिएन , थाहा थिएन उसमा त्यस्तो के थियो मेरो मन पनि आकर्षित भयो ! सोचेको पनि थिइन मलाई पनि कोहि मन पर्छ ! पहिलो दिन भएर होला ढिला भए पनि सरले केही नभनी उनलाई भित्र पस्न दिनु भयो ! अरु धेरै सिट खाली थिए तर ऊ मेरो सिट नजिकै रहेको खाली सिटमा आएर बसिन ! संयोग हुनु पर्छ ! कसैसँग पनि बोल्न र परिचय गर्न नलजाउने म ,उसलाई देखेर ,ऊ नजिकै बस्दा आफैँलाई लाज लागिरहेको थियो , मुख रातो रातो भइ रहेको थियो ! म उसँग किन लजाउनु पर्यो ? सबैको परिचय दिँदै जाँदा उसको पनि पालो आयो ! ऊ उठिन र एक्दमै कन्फिडेन्स्का साथ बोलिन , ” हाइ एभ्री वान आइ एम दिया एन्ड आइ एम फ्रम झापा ! माइ एम इज टु बि म्याथम्याटिक्स प्रोफेसर !” बाफ्रे उसको त्यो बोलिमा शक्ति म अचम्म मा परे !
दिन बित्दै गए ! ऊ मेरो साइडको सिटमा बस्न थाली जहिल्यै !कलेज सुरु भएको १०-१५ दिन भइ सकेको थियो तर आज सम्म उसको र मेरो बोलचाल भएको थिएन ! न उसले नै बोलाएकि थिइ न मैले नै ! बल्ल पढाइ राम्रो सँग सुरु हुँदै थियो ! अब लगभग सबै रेगुलर कलेज आउन थालिसकेका थिए ! अलि अलि नंयाँ साथिसँग परिचय भइ सकेको थियो ! एकदिन कलेज ब्रेक पछि इङलिस पिरियड थियो तर म्याम आइसक्नु भएको थिएन ! “हेलो मिस्टर ” यस्तो आवाजले म जस्याङ्ग भए ! उसले बोलाएकी रहिछ ! अलि आत्तिँदै फर्काएँ ” ह.. ह् हजुर !” मेरो आँखामा आँखा मिलाएर बोल्न सुरु गरि ,” आफ्नै साइडमा नयाँ साथि छ परिचय गर्नु पर्दैन है ? कि सधैँ यतिकै बस्ने बिचार छ कालु ह्यान्डसम ! ” हैट मलाई के बोलौँ के बोलौँ आएन ! सायद जिवनमा पहिलो पटक सब्दबिहीन भएँ म ! त्यही पनि हिम्मत गरेर बोलेँ ” म बोलाउने वालामै थिएँ ! तिमीले बोलाइ हाल्यौ ! हाइ म आभास ! घर ललितपुर ! स्कुल यहीँ पढेको ! आइ एम इन्ट्रेस्टेड इन लिट्रेचर ! ” यति बोल्नै धेरै गार्‍हो पर्यो मलाई !
एक्छिनमा बोली “मलाई तिम्रो नम्बर देउ ल म भाइबरमा ए्याड गर्छु !” अरे सिधै नम्बर म अचम्म मा परेँ ! त्यही पनि केही नभनी दिए ! बेलुका घर गएँ ! म पुग्दा एउटा नयाँ नम्बरबाट भाइबरमा मेसेज आएको देखेँ
“ओ कालू ह्यान्डसम यु लुक गुड ! मलाई तिमी राम्रो लाग्यो ! फेरि प्रपोज गरि भनेर मख्ख नपर नि ! तिम्रो बानी राम्रो लाग्यो भनेको……..
ओ कालू ह्यान्डसम यु लुक गुड ! मलाई तिमी राम्रो लाग्यो ! फेरि प्रपोज गरि भनेर मख्ख नपर नि ! तिम्रो बानी राम्रो लाग्यो भनेको ! पहिलाको कुराले मख्ख परेको म अन्तिम वाक्यले निरास पारिदियो ! दिया ईज टाइपिङ देखाइरहेको थियो , मेसेज आयो , ओ मेरो कालू आजको म्याथको होम्वर्क हरि सक्यौ होला त्यो पठाउ अनि आज फिज्क्स को नोट लेखाइ रहँदा म सुतिरहेको थिएँ त्यो पनि पठाइदेउ है ! ल म अहिले गएँ ! टेक केयर ! साँच्चै अचम्मकी थिइ ऊ ! न राम्रो सँग चिनेको न त क्लासमा राम्रोसँग बोलेको नै ! त्यही पनि उसको यस्तो कुरा सुनेर साँच्चै चकित थिएँ म ! त्यही पनि होमवर्क सकेर पठाइदिएँ सबै ! बेलुका मेसेज गरि थ्याङ्क यु ल ! सि यु टुमरो इन कलेज गुड नाइट !
दिन बित्दै गए ! उसको झन नजिक हुँदै गएँ म ! क्लासमा खासै कुरा त हुँदैनथ्यो तर भाइबरमा एकदमै बोल्थ्यौँ हामी ! उसको हरेक कुराले मलाई असर पार्न थालेको थियो भन्छन नि “मनको करिव जो हुन्छ नि उसका हरेक कुराहरुले असर गर्छ ” ! त्यस्तै हुन थालेको थियो मलाई ! उसको हरेक कुरा जान्न मन लाग्थ्यो , के गर्यौ , कता गयौ , के खायौ , सबै सोध्थेँ म ! मैले नसोधे पनि उसले आफैँ भन्थी ! आज यो सँग यस्तो भयो ऊ सँग यस्त्तो ! सबै भन्थी ! भनौँ हरेक कुरा सेयर गर्थी ! म पनि सबै कुरा भन्थेँ ! पहिलो पटक जिन्दगीमा यसरी नजिक भएको थिएँ कसैसँग !
ऊ र म नजिक थियौँ यो कुर मेरो स्कुलदेखी को साथिले थाहा पाएको रहेछ ! “के हो हँ त्यो सँग खुब मस्किन्छस त क्लास मा ! के हो हाम्रो त्यस्तो लाटो आभास पनि कसैसँग के हो हँ के हो ! ” एकदिन खाजा खाँदै गर्दा यस्तो भन्यो त्यसले ! केटोले मनकै कुरा भन्दियो ! तर उसको अघि त भन्न भएन ! कुरा टाल्दै बोलेँ ,”टपर हरु बढी बुझ्छब तँ पनि त्यही भाको हो बुझिस आँपे ! ” चुप लाग्यो यति भनेसी !
एक दिन खाजा खाने समय लगबग सकिइ सकेको थियो , तर ऊसलाई क्यासमा देखिन ! एकछिन म हाँस्दै साथिहरु सँग आइपुगी , ब्लेजर फुकालेर आइछ ! आच्छु यस्तो जाडोमा ! निथ्रुक्कै भिजेकी रहिछ ! क्यान्टीनमा साथिहरुसँग चल्दा पानी उसको जिउमा पोखिएछ ! मैले भित्र स्वेटर बाहिर ब्लेजर लगाएको थिएँ ,ब्लेजर खोलेँ र भने लगाउ ! उसले अलि मानिन , सायद अप्ठ्यारो लाग्यो उसलाई ! मैले धेरै कर गरेपछी समाइ मैले दिएको ब्लेजर ! क्लासका सबै कराउन थाले हामी तिर हेरेर “ओ……….हो……” के निउँ पाउँ भएको बेला मा त्यस्तो भयो !
अब ऊ एकदिन कलेज आइन भने सुनसान लाग्न थालेको थियो ! त्यो दिन पढाइ भएको सबै पठाइदिन्थेँ उसले नमागे पनि !
पुषको अन्तिम थियो , उसको जन्मदिन पर्थ्यो पुषको अन्तिम दिन ! एकदिन त्यस्तै कुरा हुँदै गर्दा उसले आफ्नो जन्म दिन भनेकी थिइ मैले फर्स्ट विस गर्छु भनेको थिएँ ! अलि राम्रो शुभकामना लेखेको थिएँ उसको लागि भनेर ! ठ्याक्कै बार्ह बजे विस गरेँ ! एइछिनमा उसको टाइमलाईनमा एउटा पोस्ट देखेँ , जुन पढेर मन खल्बल्लियो लेखिएको थियो “डियर …………
ठ्याक्कै बार्ह बजे विस गरेँ ! एइछिनमा उसको टाइमलाईनमा एउटा पोस्ट देखेँ , जुन पढेर मन खल्बल्लियो लेखिएको थियो “डियर ! माइ लभ !❤️❤️ स्पेसल डे फर मी इट्स योर बर्थ्डे ! सधैँ खुसी रहनु ! धेरै कुरा फोनेमा भनिसकेको छु अनि मेसेजमा लेखिसकेको छु त्यसैले धेरै लेख्न चाहिनँ ! स्टे ब्लेस्ड ! योर मुटु लभ्स यु अ लट !?? ”
होस गुमाएको जस्तो भएँ यती पढेर ! छोटो समयमा कसैबाट पनि धेरै कुराको आशा गर्नु हुँदैन भनेको साँचो साबित भयो !ऊ बाट कति धेरै आशा गरेको थिएँ , उसको लागि कति धेरै सपनाहरु देखिसकेको थिएँ , उसकै लागि के के गरिन ! आफ्नै साथिहरुलाई इग्नोर गर्थेँ कहिलेकाही ! उसले पनि मलाई त्यति नै माया गर्थी होला झैँ लाग्थ्यो ! उसको ब्यवहारले हो जस्तो पनि लाग्थ्यो ! साँच्चै भन्ने हो भने रिलेसनमा नभए पनि त्यो भन्दा बढी थियौँ हामी जस्तै लाग्थ्यो !
क्षणभरमा नै सबै कुराहरु सिसा झै टुक्रीए ! बिझाउन थाले त्यही सिसाका टुक्राले ! मुटु काप्न थाल्यो , टाउको भारी भएर आयो ! एकैछिनमा उसले मेसेज गरि ! लेखेकी थिइ ,”आभास आइ एम सो ह्याप्पी आज ! कति बेला तिमीलाई सुनाउँला झैँ भएको थियो ! तिमी न छौ जे भए पनि सेयर गर्ने ! हेर न आभास मेरो राजा , मेरो मुटु , मेरो प्राणले मेरो बर्थ्डे को दिन १२ बजे विस गर्यो ! मैले त सोचेको पनि थिइन उसले त्यति बेला सम्म मेरो लागी बसेर विस गर्छ भनेर ! नसोचेको कुरा गर्यो उसले ! कति खुसी छु भनेर भन्न नि सक्दिन आभस ! कती प्यारो छ नि ऊ मैले तिमीलाई आज भन्छु भनेर बसेको थिएँ ! ”
उसको मेसेजले थाहा छैन किन आँखाबाट खसेका आँसु मोबाइलको स्क्रीनमा गएर पोखिए ! साना साना कुरा ले असर गर्थ्यो मलाई ! भावुक थिएँ ! लेखेँ ,” ओहो ! म पनि तिमीलाई खुसी देख्न जो चहान्छु सधैँ यस्तै हुनु तिमीहरु दुइजाना ! सुहाउँदो छ तिमीहरुको जोडि ! अघि आकाशकी प्रोफाइल हेरेको थिएँ ह्याण्ड्सम छ , गुड लुकिङ छ सायद मनको पनि राम्रो होला !”
उसले केही समय लगाइ र रिप्लाई गरि , ” ऊ बोलेको पनि मन पर्छ , ऊ हाँसेको पनि मन पर्छ , उसको हरेक बानी मन पर्छ , उसको हरेक कुरा मन पर्छ ,ऊ दुखी हुँदा रुन मलाई आउँछ ! मनको पनि उतिकै प्यारो छ आभास ऊ जति अनुहारको छ ! फोटोमा भन्दा धेरै प्यारो छ साँच्चैमा ! ऊ भएन भने त म बाँच्न सक्दिन होला आभास ! त्यति आफ्नो बनाएको छ उसले मलाई ! ”
उसकी मेसेज पढ्दै गर्दा आँसुहरु रोकिएका थिएनन झन थपिँदै थिए , आखाहरु झन रसाउँदै थिए! आफूले प्रेम गरेको मान्छेले उसको प्रेमीको बारे भन्दै थियो म कसरी सम्हालिन सक्थेँ र !
मेसेज लेखेँ “ए ए !”
उसले फेरि केही समय पछि रिप्लाई गरि ,”आभास ऊसँग म भेटाउँछु तिमीलाई !……….
आफूले प्रेम गरेको मान्छेले उसको प्रेमीको बारे भन्दै थियो म कसरी सम्हालिन सक्थेँ र !
उसले फेरि केही समय पछि रिप्लाई गरि ,”आभास ऊसँग म भेटाउँछु तिमीलाई ! तिमी पनि खुसी हुने छौ ऊ सँग भेटेर ! तिमी जस्तै बुझ्ने छ आभास ऊ ! तिमी जतिकै प्यारो छ ! ”
टाउको भारी भयो एक्कासि , आँसुहरु निरन्तर बगिरहेका थिए, मुटु स्थिर थिएन ! धेरै पटक स्क्रीनमा पोखिए आँसुहरु ! म अरुलाऐइ हौसला दिने मान्छे आज आफैँ बिचलित भइ राखेको थिएँ आफैँलाई सम्हाल्न सकिरहेको थिइनँ !
जिन्दगीमा पहिलोपटक कोहि यति धेरै मन परेको थियो , जिन्दगीमा कोहि पहिलोपटक यसरी नजिक भएको थियो , जिन्दगीमा पहिलोपटक कोहि यति विधि प्यारी लागेको थियो ! प्रेम भएको थियो मलाई ! आभासलाई पनि प्रेम भएको थियो ! प्राय प्रेम कहानीहरु अधुरा नै रहन्छन , मनमा भएका सबै मान्छेहरु जिन्दगीमा कहाँ हुन्छन र ? धेरै सुनेको थिएँ अनि धेरै पढेको थिएँ तर आज बल्ल आफैँले भोगेँ ! आफैँले बुझेँ कति पीडा हुन्छ भनेर!
आँसु पुछेँ र रिप्लाई गरेँ ,”हुन्छ भेटौँला नि ! दिया सुतेको ल म निद्रा लाग्यो गुड नाइट , आफ्नो ख्याल गर फेरि पनि जन्म दिनको शुभकामना !”
उसको रिप्लाई आएको थिएन ! भाइबरमा उसलाई त्यति मेसेज गरेर फेसबुक खोलेँ , केही स्याड कोट्सहरु सेयर गरेँ ! अनि “सबै प्रेम कहानीहरु पूरा हुँदैनन ” यो पोस्ट आफैँ पोस्ट गरेर सुतेँ ! १ बजिसकेको थियो यतिबेला सम्म ! निद्रा थिएन! जे हुँदा पनि आमालाई सम्झिने गर्थेँ म ! कौसीमा गएँ तारा हरु हेर्दै कौसीमा एक्लै बस्न खुब मन पर्थ्यो मलाई ! २ घन्टा यतिकै बिताएँ गित सुनेर ! कौसीमा ! तल झरेँ ! सुतेँ ! बिहान उठेर कलेज गएँ ! मलिन थियो अनुहार ! कसैसँग बोल्न मन पनि थिएन ! आज उसको साइड बेन्चमा बसिन म ! लास्ट बेन्च खाली थियो , त्यहीँ गएर बसेँ , साथिहरु ले सोध्दै थिए, त्यति धेरै बोल्ने आभास आज किन शान्त , के भएछ ! मैले केही हैन भनेर थर्काइदिएं ! झर्किन मन लाग्थ्यो जोसँग बोले पनि ! ऊ मेरो धेरै पटक नजिक आउन खोजी तर म जति नजिक आई उति उबाट टाढा बस्न खोजेँ ! दिउँसो घर फर्किने बेलामा उसले मेरो लागि भनेर डेरी मिल्क ल्याइदिएकी रहिछ ! दिई मैले गार्‍हो गरेर लिएँ र भने “थ्याङ्क यु!”
दिउँसो घर पुगेर फेसबुक खोलेँ , मैले बेलुका गरेको पोस्टमा कमेन्ट गरेकी रहिछ ,”आभास के भयो किन यस्तो पोस्ट गरेको ? आर यू ओके ? ”
भाइबर मेसेन्जर जताततै मेसेज गरिछ “के भयो तिमीलाई क्लासमा नि उदास थियौ, बोल्दा नि बोलेनौ राम्रो सँग, मसँग सेयर गर न के भयो? ”
“केही हैन ठिक छु !” रिप्लाई दिएँ अफ भएँ !
केही दिन यतिकै बिते !उसको जन्म दिन को ४ दिन पछि ऊ ३-४ दिन लगातार कलेज आइन ! फोने अफ थियो ! अन्लाईन नि थिइन ! कलेज रेगुरल आउने मान्छे आज के भएछ अचम्ममा परेँ ! उसले जसलाई माया गरे नि अझै उतिकै माया लाग्थ्यो उसको जति पहिला लाग्थ्यो !राम्रोसँग नबोले पनि अझै उति नै ख्याल गर्न मान लाग्थ्यो ! पहिला देखाउँथेँ अब देखाउन मन लाग्दैनथ्यो !
कलेज न आएको ४ दिन पछि उसले फोन गरि ,”दिया” सेभ गरेको थिएँ नम्बर !
उठाएँ ! केही बोलिन धेरै बेर ! भन न के भयो किन कलेज न आको ? बारम्बार सोधेँ ! बोलिन फोन काटिदिइ !अनि आफैँ गरेँ ! …………
उठाएँ ! केही बोलिन धेरै बेर ! भन न के भयो किन कलेज न आको ? बारम्बार सोधेँ ! बोलिन फोन काटिदिइ !अनि आफैँ गरेँ ! .उठाइन !
मन नै कस्तो कस्तो भयो ! अस्ति बेक्कारमा त्यस्तो व्यवहार गरेछु जस्तो लागिरह्यो ! फेरि गरेँ अहँ उठाइन ! बारम्बार गरिरहेँ बल्ल उठाइ !
बोलेँ ,”के भयो भन न दिया ? किन फोन न उठाएको ? चार दिन भै सक्यो कलेज पनि आएकेव छैनौ ! सन्चै त छौ ? के भयो केही त बोल ! ”
एकछिन केही उत्तर आएन ! धेरै बेर पछि सुँक्क सुँक्क आवाज सुनेँ ! रोएकी रहिछ ! थाहा पाइहालेँ ! “किन रोएकी दियु? के भयो भन न ! म सँग नि भन्दुनौ तिम्रो साथी अभासलाई नि भन्दिनौ ? ”
उसले बोलि ,”आभास ! बाबा !” बस यति बोली अनि रुन थालि ! अब म पक्का भएँ केही पक्कै भएको छ ! ऊ भन्ने गर्थी बाबा बिरामी हुनुहुन्छ कहिलेकाही हस्पिटल लगि राख्नु पर्छ ! बिरामी भएर यो पाली नि हस्पिटल लगेको होला सोचेँ !
“‘बाबा बिरामी हुनु भयो हो ? कहाँ छौ तिमी ! के भयो बाबालाई ?” सोधेँ !
“हि इज नो मोर विथ अस आभास ! “रोएर बोली !
बोली रोकियो मेरो ! गला अबरुद्ध नै भएको जस्तो भयो ! सकिङ खबर थियो ! आँखा अघि अनेक कुरा खेल्न थाले !
मैले केही बोल्न नपाउँदै उसले रुँदै भनी ,
“आभास ! बाबाले छोडेर जानू भयो मलाई ! मेरो पहिलो माया , हि इज माइ फर्स्ट लभ आभास ! अब कसरी बाँच्नु म ! मेरो भाइलाई कसले हुर्काउँछ अब ? मेरी ममीलाई कसले माया गर्छ आभास अब ! म एक्ली भएँ मेरो परिवार एक्लो भयो आभास !”
उसका हरेक शव्दहरुमा पीडा थिए! म पनि रुन पुगेछु ! अँह म केही बोल्न सकिन ! के भन्नू के गरि दियालाई सम्हालौँ केही सोच्नै सकिन!
ऊ रुँदै थिई ! उसको आँखाको आँसु देख्न नसक्ने म आज उसलाई यस्तो अवस्थामा पाएँ !
” म कति अभागी है आभास! म कति अन लक्की ! यति सानैमा बाबाले छोडेर जानू भयो! अब भोलिदेखी कसले मलाई नानू भन्छ , कसले मलाई माया गर्छ , कसले साथ दिन्छ आभास मेरो बाबाले जसरी ! ”
मैले सम्झाउनु पर्छ उसलाई जस्तो लाग्यो ! आँसु पुछेर बोलेँ ,” मान्छेको जीवन कति बेला के हुन्छ भर नै हुँदैन दिया ! ममी हुनुहुन्छ , भाइ हुनुहुन्छ , ममीलाई पनि सम्हाल्नु छ दिया अब तिमीले ! ममीको साहारा भाइको साहारा हौ तिमी अब ! तिमी आफैँ यस्तो भयौ भने कसरी सम्हाल्छौ ममीलाइ ! तिमी रोएको देख्दा कस्तो लाग्छ तिम्रो ममीलाई ! बुझ्छु म तिम्रो कुरा तिम्रो प्राण तिम्रो बाबा तिम्रो सबैथोक ले छोडेर जाँदा तिमीलाई के भयो होला भनेर ! सहन सक्ने कुरा पनि छैन ! तर पनि भाइको लागि ममीको लागि तिमी सम्हालिनु पर्छ दिया ! आफूलाई सम्हाल! अब बाबाको सपना हरु तिमीले पूरा गर्नु पर्छ !”
ऊ रुन रोकिएकी थिइन !
“थाहा छ आभास तर पनि मैली आफूलाई सम्हाल्न सकेको छैन ! भगवान कति निस्ठुरी है आभास ! ”
यो सोध्न हुने समय त थिएन तर पनि सोधेँ ” दिया के गरि भयो यो सब ?”
“मेरो जन्मदिनको दिन कलेज सकेर घर आएँ !राती बर्थ्डे सकेर सबैजाना सुत्ने तरखरमा थियौँ ,…………
रुँदै बोली ,”मेरो जन्मदिनको दिन कलेज सकेर घर आएँ !राती बर्थ्डे सकेर सबैजाना सुत्ने तरखरमा थियौँ , बाबा ममी र भाइ झापा नै हुनुहुन्थ्यो , म यहाँ मामाघरमा बसेर पढ्थे, उहाँहरुको कार्य ब्य्वस्थताले गर्दा आउन पाउनु भएन ! फोन गरेर म सुतेँ ! बिहानै मोबाइलको घन्टी बज्यो ! बिहानको करिब ४ बजेको थियो , बिहानको मीठो निद्रामा थिएँ म , दुइपटक घन्टी बजेसी बल्ल उठाएँ ,!ममीले गर्नु भएको रहेछ ! छोरी आज घर आउ है बाबालाई भेट्न मन लागेको छ रे भाइ पनि दिदी दिदी भन्दै छ ,तिम्रो बर्थ्डे नि सेलिब्रेट गरौँला दुई दिन बसेर फर्कनु ! ममीको स्वर एकदमै निरासा पुर्ण थियो ! डर मिसिएको थियो ! सायद रुँदै हुनुहुन्थ्यो !
“सबै ठिकै त छ नि मामु ?”सोधेँ !
“सबै ठिक छ मामालाई लिएर आउ है मैले कुरा गरेको छु !”
यति भनेर फोन राख्दिनु भयो !
एक्कासी यस्तो फोन ! पक्कै केही भएको जस्तो लाग्यो ! डर लाग्न थाल्यो , मामुले केही कुरा लुकाएको जस्तो लाग्यो ! मामा र म बिहानै झापा पुग्यौँ ९ बजे ! मामाले मलाई सिधै हस्पिटल लिएर जानू भयो !
अचम्म लाग्यो ! घर जान भनेर हिँडेको म !
“मामा हामी त घर जान लागेको अनि किन हस्पिटल ? “सोधेँ !
“मेरो एकजाना साथी भेट्नु छ भेटौँ अनि जाउँला नि है !
यहीँ नजिकै त हो ! ”
आइ .सि .यू अघि पुग्यौं, ! त्यहाँ पुग्दा , ममी , भाइ ,मामाघरको हजुर आमा , बाबाको साथि , सानुममी , घर वरपर का मान्छे सबै हुनुहुन्थ्यो ! ममी एक कुनामा बसेर रुँदै हुनुहुन्थ्यो ! सबैको अनुहार मलिन थियो ! अब निश्चिति भएँ पक्कै केही भएको छ ! ममी नजिक गएँ र सोधेँ ,
“ममी कसलाई के भयो ! किन हस्पिटल हजुरहरु सबै ? ममी बोल्नु न अनि बाबा खोइ ? व्ह्येर इज ड्याड ममी ? बाबा खोइ ? ”
अँह कोहि केही बोलेनन् ! मामुको आँसु रोकिएको थिएन ! अङ्गालोमा बेरेर रुँदै भन्नू भयो ,
“छोरी ! तेरो बा..बा…तेरो बाबा हामीलाई छोडेर जानू भयो ! कहिल्यै नफर्कने गरि ! ”
कति रोएँ कति कराएँ मलाई मात्र थाहा छ आभस त्यो दिन म ! जति रोए पनि मरेर गएको मान्छे कहाँ फर्केर आउँदो रहेछ र आभास !
बेलुकै बाबालाई हृदयघात भएर ल्याइएको रहेछ ! बाटामा आउँदा नै बाबा …..
डाक्टरले बेलुकै बाबालाई मृत घोषणा गरेछ !
त्यसैले कसैलाई फोन गरिन आभास ! तिमीलाई नि भन्ने समय भएन ! म आफैँले आफैँलाई सम्हाल्न सकेको थिइन आभास !
आज ममीले फोन गर तेरो साथिलाई , कलेजमा खबर गर्दिनु भन भन्नू भयो अनि तिमीलाई फोन गरेँ ! ”
उफ ! मलाई उसले भनेको सुन्दैमा भावुक भएको थिएँ उसलाई के भएको थियो होला !
“टाढा छौ अरु त म केही सहयोग गर्न सक्दिन दिया ! तिम्रो केही नोट कपीहरु पठाइदेउ म गर्दिन्छु ! ” भनेँ !
“होस आभास ! तिम्रो आफ्नै गर्नु हुन्छ कति धेरै कसरी भ्याउँछौ ! म आफैँ आएर गर्छु !” बोली !
मैले धेरै कर गरेपछी हुन्छ भनी ! भोलिपल्ट साथी उसको मामाघर गएर उसको फिजिक्स , केम्सेस्ट्री त बायो कपी ल्याइदिइन !
ऊ नहुँदा जे जे पढाइ भयो ती तीन सब्जेक्टको गरिदिएँ! मेरो कर्तव्य पनि थियो !
उसको बाबा बित्नु भएको १५ दिन पछि ऊ कलेज आइ !
दिनहरु बित्दै गए ! हेर्दा हेर्दै ११ को बोर्ड सकियो ! १२ मा पनि हामे एउटै सेक्सन पर्यौँ !
उसलाई मैले हरेक कुरामा सघाउँदै आएँ !
१२ को आधा भएपछि उसले एकदिन मलाई ब्रेक हुनुभन्दा एक पुरियड अगाडी “ब्रेकमा आज सँगै खाजा खाउँ ल ! केही कुरा गर्नु छ तिमीसँग ! ” भनेकी थिइ !
गएँ ! केहीबेरेमा ऊ पनि आई !
चिया अनि समोसा तरकारी खायौँ !
एकछिन दुबै सुनसान बस्यौँ , अनि उसले बोली
“ब्रेकमा आज सँगै खाजा खाउँ ल ! केही कुरा गर्नु छ तिमीसँग ! ” भनेकी थिइ !
“आभास केही भन्नू छ तिमीलाई ! धेरै दिन देखि यही कुराले डिस्ट्र्ब छ मेरो मन पनि ! अरु कोहि छैन तिमी जति नजिक ! तिमीसँग नभनी बस्नै सकिन ! त्यसैले बोलाएको तिमीलाई आज ! ”
अब फेरि त्यही आकाशको कुरा गर्ने होलि भनेर मन खल्लो भै रहेको थियो तर पनि आफूलाई सम्हाकेर बोलेँ !
“हुन्छ भन न के कुरा हो ! सक्ने रहेछु भने सल्लाह पनि दिन्छु तिमीलाई ! सुनाएर तिमीलाई मन हल्का हुन्छ भने भन न ! म तिम्रो जस्तो कुरा सुन्न पनि तयार छु ! ”
अलि लामो सास फेरेर ऊ बोल्न सुरु गरि ,”आभास , आकाशले मलाई छोडिदियो ! उइ आर नो मोर इन रिलेसनसीप ! ”
आँखा भरिइसकेका थिए उसका ! उसको यस्तो कुरा सुनेर अचम्म लाग्यो धेरै समय भएको थियो ऊसँग आकाशको बारेमा नसोधेको !
अलि सक्ड भएर बोलेँ , ” व्हाट ? के भन्दै छौ तिमी ? अनि एक बर्ष नि भएको छैन तिमीले ऊ यस्तो ऊ उस्तो भनेर बर्णन गरेको अनि यति छिट्टै यस्तो ? के भयो र किन छुटेको ? तिमीले त भन्दा नि भनेको थिएनौ त ! ”
“मान्छे बदलिन कति समय लाग्दो रहेछ र आभास ! अनि समय सँग मान्छे हरु पनि बदलिने हरेछ , मान्छेको बानी पनि !
आकाशले म बाट त्यो अपेक्षा गर्दै थियो जो म उसलाई दिन सक्दैनथेँ , त्यो महसुस खोज्दै थियो जसको बारे म अहिले सोच्न पनि सक्दैनथेँ ! र जसले उबाट मलाई टाढा हुन बाध्य बनायो ! ”
निरासा मिसिएको बोलिमा उसले भनी यो सब कुरा ! उसका कुराले मलाई अनौठो लागिरहेको थियो ! ऊ दुखी देखिन्थी त्यसैले नराम्रो पनि !
“किन के भयो र दिया तिमीहरुबिच त्यस्तो भयो ? के माग पूरा गर्न सकेनौ उसको र तिमी हरु छुट्टियौ? ” सोधेँ !
चिया को कपलाई अलि ओअर सार्दै बोली ,” आकाश १५ दिनको बिदामा यु एस बाट नेपाल आएको थियो ! भेट नभएको पनि २ बर्ष भएको थियो ! म पनि एकदमै उत्साहित अनि खुसी थिएँ ऊ आउने कुराले ! मन एकदमै पुलकित भएको थियो ! मेरो राजा नेपाल आउँदै छ भनेर ! ऊ पनि एकदमै खुसी थियो ! अब यति दिन बाँकी दियु , अब उति दिन बाँकि भनेर सुनाउने गर्थ्यो ! म भन्दा धेरै खुसी थियो आकाश ! नेपाल आयो ! ऊ आएको भोलिपल्ट भेटेँ उसलाई ! मेरो लागि ब्याग र चकलेट ल्याइदिएको थियो उसले त्यो दि जिन्दगी कै सबैभन्दा खुसी दिन थियो मेरो लागि ! मेरो आकाशसँग जो भेट भएको थियो ! ऊ पनि एकदमै खुसी थियो ! भेट भएको एक दिन राती हामे म्यासेन्जरमा कुरा गर्दै थियौं, ! उसले एउटा यस्तो प्रस्ताव राख्यो जुन मैले ऊ बाट कहिल्यै आउला भनेर सोचेको पनि थिइनँ !
ऊ मसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न चहान्थ्यो ! जुन कुराको खुसी म उसलाई बिहे अघि दिन सक्दैनथेँ ! यो ठिक थिएन ! ऊ मेरो हुन्छ हुँदैन यो पनि त थाहा थिएन , भोलि छुटिन पनि त सक्थ्यौँ नि आभास हामी होइन र ? म उसँग त्यस्तो सम्बन्ध मा बसेर यदि हामी छुट्टिएको भए मैले मेरो हुने वाला श्रीमानलाई धोका दिएको हुने थियो आभास ! उसले जति कर गर्दा नै मैले यो कुरा मानिन ! यही बिषयमा हामी बिच दैनिक झगडा हुन थाल्यो ! उसले मेरो चरित्रमा पन्ज औँला उठाउन थाल्यो ! मलाई लाग्छ शरीर माग्नेले प्रेम गर्दैन ! शारिरिक मोहमा लिप्त भए पछि छोड्न नि सक्छ नि हैन र मलाई यो सब मन परेन अनि म छुटिएँ ऊबाट ! एक महिना भयो आभास ! अहिले म ऊसँग कुनै प्रकारको कन्ट्याक्ट् मा छैन आभास ! ”
उसको कुराले मेरो मन खलबलाइदियो !
” तिमीलाई त्यो सम्बन्धबाट खुसी थिएन भने छोड्नु नै उचित हुन्छ दिया ! जुन कुराबाट सन्तुष्ट भइँदैन नि त्यस्तो सम्बन्ध हरु कुनै पनि राम्रो हुँदैन ! असन्तुष्टिमा बनेका कुनै पनि सम्बन्धहरु टिक्दैनन दिया ! यदि यो डिसिजन बाट खुसी छौ भने एकदम ठिक गर्यौ तिमीले ! अब जे भयो भयो आफूलाई सम्हाल्ने कोशिस गर दिया ! गार्हो छ् तर पनि तिमीले गर्नु पर्छ दिया ! तिमीले साँचो मनले उसलाई चाहेको थियौ , त्यसैले तिमीलाई गाह्रो हुन्छ बिर्सन तर पनि तिमीले सक्छौ स्ट्रोङ छौ तिमी ! ” सुझाब दिएँ!
” म खुसी छु आभास ! कुनै पश्चताप छैन आभास मलाई अब ! ”
जवाफ फर्काइ !
यस्तै कुरा गरेर हामी क्लास फर्कियौँ !
मैले दियालाई माया गर्छु भन्ने कुरा दियालाई थाहा थिएन! यो भ्यालेनटाइनमा भन्छु भनेर बसेको थिएँ म ! तर यस्तो अवस्था भन्नू ठिक थिएन जस्तो लाग्यो ! होस प्रेम गर्दैमा दर्साउनु पर्छ भन्ने नि छैन म उसलाई प्रेम गर्छु भन्ने मलाई थाहा छ त्यति भए भयो ! समय मिलेछ भने अरु कुनै दिन फेरि भनौला !
फ्रेब्ररी ७ को रात थियो निद्रा थिएन् ! मोबाइलमा फिल्म हेरेर बसेको थिएँ मोबाइलमा घन्टी बज्यो ! उसको मेसेज रहेछ ! रातको ठ्याक्कै १२ बजेको थियो ! खोलें, सुरु गरेँ पढ्न ! लेखिएको थियो , ” आभास ……
फ्रेब्ररी ७ को रात थियो निद्रा थिएन् ! मोबाइलमा फिल्म हेरेर बसेको थिएँ मोबाइलमा घन्टी बज्यो ! उसको मेसेज रहेछ ! रातको ठ्याक्कै १२ बजेको थियो ! खोलें, सुरु गरेँ पढ्न ! लेखिएको थियो , ” आभास धेरै कुरा छ तिमीलाई भन्नू पर्ने ! मनमा अनेक कुरा छन तिमीलाई भन्न भनेर साँचेका ! थाहा छैन तिमीलाई मेरो कुराले के हुन्छ , कस्तो असर पार्छ , अनि यो पनि थाहा छैन तिमीलाई मेरो कुरा मन पर्छ या पर्दैन ! मेरो कुराले तिमीलाई कति चोट देला , नराम्रो लाग्ला त्यसको लागि म पहिला नै तिमीलाई सरी भन्न चहान्छु ! आभास कलेजका दिनहरुमा तिमी जस्तो पनि साथी हरु हुन सक्छन भनेर मैले कहिल्यै कल्पना पनि गरेको थिइनं, ! कोहि कसरी यति प्यारो हुन सक्छ ? कोहि कसरी यति सहयोगी हुन सक्छ ? कोहि कसरी यति धेरै बिश्वासिलो हुन सक्छ आभास ? मेरो हरेक कुराको ख्याल हुन्थ्यो तिमीलाई , के गर्दै छु को सँग छु ठिक छ कि छैन मलाई केही आवश्यक छ कि छैन ? तिमी कति धेरै सहयोगी छौ है आभास , यति सम्म कि क्लासमा केही फोटोकपी गर्नु हुँदा तिमी मेरो लागि पनि किनेर ल्याइदिन्थ्यौ, आफूलाई पेन किन्दा मेरो लागि पनि किनेर ल्याइदिन्थ्यौ , कति हो कति पटक मेरो प्र्याक्टिकलको ड्रइङ नि बनाइदिन्थौ ,मेरो बाबा बितेर म कलेज न आएको बेलामा मेरो सबै नोट पनि गरिदिएका थियौ ?? म एकदिन कलेज न आउँदा सबैभन्दा बढी चासो तिमीलाई हुने गर्थ्यो आभास ! क्लासमा कसैले मेरो बारेमा नराम्रो भन्दा सबैभन्दा पहिला मुख बन्द गराउने तिमी हुन्थ्यौ आभास ! कलेजको हेड बोइ भएर सबैको अघि तिमीले हरेक चोटि बोल्दै गर्दा कहिले आँसु निकालिदिन्थौ , कहिले ओठमा हाँसो ! तिम्रा ती सब्दहरुको बयान पूरा कलेजले गर्ने गर्छ , तिम्रो लिडरसिप क्वालिटिको बर्णन पूरा कलेजले गर्ने गर्छ ! कहिँ क्यान्टिनमा जाँदा पनि तिम्रै कुरा भइ रहेको सुन्दा छाती गौरबले चौढा हुने गर्छ आभास ! मेरो सबैभन्दा प्यारो साथि आभास छ भनेर! कलेजमा तिम्रो फ्यान नभएको कमै होलान आभास त्यसमध्य पनि सबैभन्दा ठूलो फ्यान म हुँ आभास ! तिम्रो जति हक अरु कसैको छैन ममा ! तिमी मेरो लागि प्रेरणा को स्रोत हौ आभास ! यु आर माइ इन्पिरेसन ! ओ कालू ह्यान्डसम ! कति तिता मिठा कुराहरु भए हामी बिच तर हामी कहिल्यै छुट्टिएनौँ , तिमी कहिल्यै टाढा भएनौ म बाट मैले जे जे भन्दा नि तिमीले देखायौ , एउटा असल साथिको परिभाषा !म स्वार्थी भएँ नसोच आभास ! अरु कसैसँग रिलेसन टुटेर मसँग नजिक हुन खोज्यो नसोच आभास ! तिमीलाई जति इज्जत म कसैलाई गर्दिन ! तिम्रो लागि यो मनमा जति सम्मान छ नि म उतार्न सक्दिन सब्दमा तिनलाई ! इभन मेरो मामु पनि तिम्रो फ्यान हो , तिम्रो ब्याक्तीत्वको ! तिम्रो लागि जति लेखे पनि कमै हुन्छ ! थाहा छैन तिम्रो मनमा के छ मेरो लागि , यो पनि थाहा छैन के सोच्छौ मेरो बारेमक बट आइ रेसपेक्ट यु , तिमी मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ , आइ लभ यु आभास ! ❤️ बरु नो भन तर मबाट टाढा नहोउ है आभास , मलाई तिम्रो फ्रेन्डसिपको साथ अझै चाहिन्छ बाँचुन्जेल ! ”
मेसेज पढ्दै गर्दा कति बेला रुन पुगेँ थाहै पाइन ! आज सम्म कसैले मलाई यति लामो मेसेज यसरी गरेको थिएन ! मैले जसलाई मन पराउथेँ उसैले यो सब भनिरहेको थियो !
उबाट कहिल्यै यस्तो मेसेज आउला भनेर सोचेको पनि थिइन !
खुसी थिएँ यति धेरै कुरै छोडौँ ! हतार हतारमा मेसेज लेखेँ ” पहिले देखि भन्न नसकेको कुरा, तिमी सोच्न पनि सक्दैनौ कति चहान्छु म तिमीलाई भन्ने कुरा तिमी बुझ्न पनि सक्दैनौ तिमी को हौ भन्ने कुरा , तिमीले तिम्रो र आकासको बारेमा कुरा गर्दा म जति कोहि रोएन होला सायद , कति चोट सहेँ त्यति बेला , आज तिमी आफैँले यो सब कुरा भनिरहेका छौ बिश्वास पनि हुन सकेको छैन मलाई ! यति खुसी बनाइदिएका छौ मलाई सोच्न पनि सक्दिन ! पर्खाइ ठूलो कुरा हो प्रेम गर्नेले पर्खन सक्नु पर्छ एकदिन आफ्नो हुन पनि सक्छ भनेको कुरा साँचो लाग्दै थियो ! आइ लभ यू मोर दिया ! आज सम्म साथ दिँदै आएको छु र तिम्रो हरेक सुख दुखमा साथ दिने बाचा गर्दछु ! ”
फाइनल्ली आभास नि कसैसँग रिलेसनमा थियो ! अब हाम्रो झन धेरै कुरा झन धेरै भेट हुन थाल्यो हामी कलेज नभएको दिन पनि भेट्न थाल्यौँ ! एकदमै नजिक थियौँ ऊ पनि एकदमै खुसी थिइ ! १२ को बोर्ड एक्जाममा हामी एउटै बेन्चमा पर्यौँ मैले यति सहयोग गरेँ उसलाई कुरा छोडौँ ! १२ सकियो हामी बिदामा थियौँ ! पहिला दिनौँ भेट हुन्थ्यो अब १०-१५ दिनमा एकचोटी हुन थाल्यो ! ब्याचलर तयारीमा थिएँ म ब्याचलर ओन सोसल वोर्क कोर्स जोइन गरेँ ! उसले एक बर्ष लिभ लिन्छु आभास अनि सुरु गर्छु भनेकी थिइ ! मेसेज भइ राख्थ्यो हाम्रो , फोनमा कुरा पनि भेट पनि हुन्थ्यो !
म ब्याचलर सेकेन्ड बर्षमा थिएँ ! उसले पनि ब्याचलर जोइन गरि ! सबै राम्रै चल्दै थियो !
एकदिन उसले भेट्न बोलाइ ! हाम्रो भेट नभएको पनि धेरै भइ सकेको थियो लगभग २ महिना ! मैले बोलाउँदा नि भेटौँला नि भनेर टारिदिएकी थिइ ! मेसेजमा नि राम्रोसँग कुरा भएको थिएन !
गएँ , लोकन्थलीको रेड रोज क्याफे ! हामी सधैँ भेट्ने ठाउँ ! म गएर बसेँ ऊ आइपुगेकी थिइन ! केही बेरमा ऊ आइपुगी र उसलाई जुन रुपमा देखेँ ,………………………
मेसेजमा नि राम्रोसँग कुरा भएको थिएन !
गएँ , लोकन्थलीको रेड रोज क्याफे ! हामी सधैँ भेट्ने ठाउँ ! म गएर बसेँ ऊ आइपुगेकी थिइन ! केही बेरमा ऊ आइपुगी र उसलाई जुन रुपमा देखेँ , म हेरेको हेर्यै भएँ ! स्कुटर क्याफे अघि रोकि हेल्मेट खोलि ! कहिल्यै कुर्था नलगाउने मान्छे , अलि मोर्ड्न हुन रुचाउने ऊ आज ऊ कालो जिन्स र निलो टप्स लगाएर लगाएर आएकी थिइ! निधारमा रातो टिका थियो , गलामा टल्कने पोते थियो अनि बिचमा सिउँदो बनाएर दुइतिर कपाल फिँजाएकी थिइ र त्यो सिउँदो भरी रातो सिंदुर थियो ! कस्तो सुहाएको उसको सिउँदोमा सिंदुर , कस्तो राम्र्क देखिएको उसको गलामा पोते ! अनि कस्तो सुहाएको उसलाई निधारमा त्यो रातो टीका ! वाह! तर अपसोच त्यो सिउँदोको सिंदुर मेरो थिएन , त्यो गलाको पोते मेरो नामको थिएन! कहिल्यै सोचेको थिइन मैले उसलाई कहिल्यै अरुको कारणले यो रुपमा देख्छु भनेर ! सबै कुरा सिसा झैँ झर्ल्यामझुर्लुम्म भए मेरै आँखा अगाडि ! सबै सपनाहरु ! आँखा टिलपिल टिलपिल थिए तर खस्न सकेनन आँखाबाट !
ऊ मेरो सामुन्ने आइ र बसि ! आँखाबाट आँसु खसाल्दै उसलाई हेरेको हेर्यै भएँ म ! मुख खुलेनन मेरा ! केही बोल्न सकिन ! आँट नै आएन!
“आभास ! थाहा छ मलाई यो रुपमा यसरी देख्दा तिमीलाई कति पीडा भइरहेको होला भनेर ! के भनौँ कसरी भनौँ आभास ! तिमीसँग जति नजिक भए पनि मैले कहिल्यै आकाशलाई भुल्न सकेको थिइनँ ! हरेक पल याद आउँथ्यो ऊ मलाई ! तिमीसँग जुन जुन रुपले नजिक भएँ हरेक पल सम्झन्थेँ आकाशलाई ! चाहेर पनि बिर्सन सकेको थिइनँ उसलाई !
तिमी ब्याचलर पढन सुरु गरेको लगबग एक बर्ष हुन लाग्दा एक दिन राती उसको फोन आएको थियो! यति रोयो नि आभास ऊ मेरो लागि , उसले मेरो अघि माया को भिक माग्दै थियो ! कहिल्यै देखेको थिइनँ केटा मान्छे त्यसरी रोएको ! त्यो दिन त खासै केही कुरा गरिनँ मैले तर त्यसपछि उसको आँसु सहन सकिन मैले ! दिन दिनै फेरि हाम्रो कुरा हुन थाल्यो ऊ हरेक पटक मलाई आफ्नो बनाउने पहिला जस्तो केही नमाग्ने मेरो चहाना बिपरित भन्न थाल्यो ! उसको अघि मेरो केही लागेन आभास !आखिर “पहिलो प्रेम कहाँ भुलाउन सकिने रहेछ र !” आभास ! आकाश मेरो पहिलो प्रेम जो थियो ! उसले मेरो घर परिवार सबैसँग कुरा गर्यो ! मेरो परिवार र उसको परिवारको सल्लाहमा मेरो बिवाह पक्का भयो र एक महिना अघि मेरो बिवाह भयो आकाशसँग ! म खुसी पनि थिएँ मेरो पहिलो प्रेम मेरो भयो भन्ने कुरामा ! तर नराम्रो पनि लागेको थियो , मैले तिमीलाई धोका दिएँ भन्ने कुराले ! मैले मेरो बारे मात्र सोचेँ आभास तिम्रो बारे सोचिनँ मलाई जे भन्न नि सक्छौ आभास तिमीले चरित्रहीन , स्वार्थी ! हो म स्वार्थी भएँ आफ्नो प्रेमको लागि ! म माफीको लायक त छैन तर पनि मलाई माफ गरिदेउ आभास सक्छौ भने ! कहिल्यै ॠण तिरेर सक्ने छैन म तिमीले मलाई लगाएको गुणको ! ”
ऊ बोल्दै गइ ! मलाई केही बोलुँ जस्तो नि आएन !बस आँखाबाट अविरल बगिरहे !
त्यति प्यारीलाग्ने दियाको बोलिमा आज मैले कठोरता भेटेँ ! ऊ बोल्दै गइ;”आभास म कहिल्यै बिर्सन सक्दिन तिमीले कलेज पढ्दा गरेको सहयोगको ! मेरो जिन्दगीको गरेक मोडमा दिएको साथ कहिल्यै बिर्सन सक्दिन आभास !
आइ एम सरी !
बाध्यता समयले यस्तो गरायो ! तिमी यती प्यारा छौ नि आभास जो कोहिले तिमीजस्तै जीवनसाथि पाओस भनेर कामना गर्छ ! तिमीलाई पाउने मान्छे संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानी हुन्छ ! तिमीले तिमीले गर्ने भन्दा धेरै माया गर्ने पाउँछौ आभास !
अब केही हप्तामै आकासँग म अमेरिका जाँदै छु ! आफ्नो ख्याल गर्नु! आभास ,सायद यो हाम्रो अन्तिम भेट हुनेछ ! ।आइ एम सरी !”
यति बोली जुरुक्क उठेर गइ म हेरिराखेँ ! आँखाबाट आँसु खसिराखे ! अँह उसले फर्केर एकचोटी पनि हेरिनँ ! न त मैले बाइ गर्नलाई हात नै उठाउन सकेँ !
लेखक : पुष्प संजेल